Imibuzo Evame Ukubuzwa - Opticcolors
Ingabe athumela emhlabeni wonke?
Yebo, sithumela emhlabeni wonke. Izindleko zokuthumela zizosebenza, futhi zizongezwa ekuphumeni. Senza izaphulelo nezenyuso unyaka wonke, ngakho-ke hlala ubukele amadili akhethekile.
Kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthola i-oda lami?
Isikhathi sokulethwa sincike endaweni okuyo. Onke ama-oda azothunyelwa kusuka kokunye kwethuices eYurophu, e-United States noma e-Asia. Uma u-oda, i-oda lakho lizothunyelwa lisuka endaweni eseduzane. Ungakhetha indlela yokuthumela "ejwayelekile" noma "yokuveza" futhi izikhathi zokulethwa ezilinganisiwe zizokhonjiswa ekuphumeni.
Isikhathi sokuthumela futhi sincike ekubambezelweni kwamanje ezweni lakho noma endaweni. Imininingwane yokulethwa inikezwa ku-imeyili yakho yokuqinisekisa.
Chofoza lapha ukubuka izikhathi zokulethwa ezilinganisiwe.
Yiziphi izinto zokuhambisa ozisebenzisayo?
Sisebenzisa bonke abathwali abakhulu, nabalingani beposi bendawo. Uzocelwa ukuthi ukhethe indlela yokulethwa ngesikhathi sokuphuma.
Ingabe unamalensi anencwadi kadokotela?
Yebo sinakho. Khetha okufunayo umbala bese ukhetha ifayela lakho le- power kusuka kwimenyu yokudonsa.
Ama-lens ahlala isikhathi esingakanani?
Bangamalensi anyanga zonke ongawagqoka izikhathi ezingama-30. Uma ugcina kahle amalensi, ungathatha futhi amakhefu phakathi kwezinsuku.
Asithengisi amalensi unyaka ngezizathu zenhlanzeko. Ngoba kungaba yingozi empilweni yamehlo akho esikhathini eside esizayo.
Yini imininingwane yamalensi?
Faka lens lens: 14 amahora
Kungani kunomehluko wombala ngokuqhathaniswa nezithombe ezikule webhusayithi?
Opticcolors amalensi agcizelela ubuhle bemvelo bamehlo. Amalensi wethu ombala amboza ngokuphelele, kepha hlanganisa kancane nombala wamehlo akho Ngoba amalensi enzelwe ukubukeka kwemvelo. Umphumela ngakho-ke uncike kumbala wakho weso. Kuya futhi ngesilinganiso sokukhanya kwesithombe, kanye nokulungiswa kwesikrini sakho.
Ungayisebenzisa kanjani futhi uyivikele kanjani imibala yelensi?
Chofoza lapha ukubona imiyalo.
Hlobo luni lwesisombululo se-lens okufanele ngilusebenzise?
Sincoma ukusebenzisa isisombululo se-lens yonke-in ngamalensi athambile.
(Qiniseka ukuthi awasebenzisi amanzi. Lokhu kuzolimaza amalensi futhi kungadala izifo zamehlo.)
Yini okufanele ngiyenze uma kwenzeka ngizwa ukungakhululeki noma ukungaboni kahle ngenkathi ngigqoke?
Qiniseka ukuthi amalensi ahlanzekile. Esinye sezizathu sokuthi i-lens ayikhululekile ukuthi kunezinhlayiya zamaprotheni ku-lens. Kungcono ukuyihlanza ngoketshezi lwe-all-in-1. Qiniseka ukuthi awasebenzisi amanzi. Lokhu kulimaza amalensi futhi kungadala ukutheleleka.
Esinye isizathu kungaba ukuthi ubeka ilensi ngaphakathi ngaphandle. Ilensi inezinhlangothi ezimbili.
Isizathu sesithathu ukuthi uyiklwebhile ilensi. Lokhu futhi kukunikeza umbono ofiphalisiwe futhi ilensi nayo ayikhululeki kangako.
Isizathu sokugcina ukuthi uhlushwa yi-astigmatism. Lokhu kusho ukuthi iso lakho lehlukile. Ngalokhu udinga ukuya kudokotela wamehlo ukuze ukuhlole. Ukuze ukwazi ukuthenga amalensi aklanywe ngokukhethekile.
Chofoza lapha ukubona imiyalo
Imininingwane yezokuphepha ngokugqoka amalensi wokuxhumana.
- Geza izandla zakho njalo ngaphambi kokugqoka, ukususa noma ukuphatha amalensi oxhumana nawo.
- Ungabolekisi, ungaboleki noma wabelane ngamalensi osetshenzisiwe, kungenjalo, kungaholela ekuthelelekeni emehlweni akho.
- Sicela ususe amalensi akho ngaphambi kokulala.
- Faka amalensi ngaphambi kokufaka ukwakheka eduze kwamehlo, bese ususa amalensi ngaphambi kokuzicwala.
- Sicela ungayi emidlalweni yamanzi lapho ugqoke amalensi.
- Thintana nodokotela wakho we-lens oxhumana naye ngaphambi kokusebenzisa noma imuphi umuthi wamehlo ngenkathi ugqoke amalensi akho oxhumana nawo.
- Ungasebenzisi uma uphawu oluphazamisekile lwenzekile.
- Uma kwenzeka ukuphikiswa iso, yeka ukusetshenziswa ngokushesha, susa ilensi esweni bese uthintana nodokotela wakho we-lens oxhumana naye.
- Gcina yonke imikhiqizo yokunakekelwa kwe-lens ekude nezingane.
- Ungasusi cap kusuka ecaleni ngesikhathi isitoreji lens lens.
- Ungavumeli ithiphu ye-nozzle ukuthi ithinte noma yimuphi umphezulu.
- Njalo shintsha cap ibhodlela ngemuva kokusetshenziswa.
- Musa ukuhlanza ilensi yokuxhumana noma i-lens icala ngamanzi ngokuqondile empompini.
- Icala lakho lokugcina lens kufanele lihlanzwe njalo futhi lishintshwe kaningi njengoba kunconywa udokotela wakho we-lens oxhumana naye.
- Ukuqinisekisa ukuthi ukuphepha kwamehlo akulinyazwa, akufanele uphinde usebenzise isisombululo. Uma amalensi agcinwa izinsuku ezingaphezu kwesikhombisa kusixazululo, kunconywa ukuthi uphinde inqubo yokulwa namagciwane.
- Musa ukusebenzisa ngemuva kosuku lokuphelelwa isikhathi okukhonjiswe kumkhiqizo.
Chofoza lapha ukubona inqubo yoku-oda.
Iziphi izindlela zokukhokha esizinikezayo?
You can pay with us with iDEAL, PayPal, MasterCard, Visa, Bancontact / Mister Cash, SOFORT Banking, Paysafecard, Visa Electron, Maestro, Belfius, American Express, KBC, Giropay, EPS and Cartes Bancaires. As an extra service sinikeza futhi nethuba lokukhokha kusengaphambili ngokudluliselwa kwebhange. Khumbula ukuthi ezinye izindlela zokukhokha ezifana nokuthi "ukudluliswa kwebhange" kungathatha izinsuku ezimbalwa zebhizinisi ukuqedela okwenziwayo. Sizokuthumelela i-oda ngokushesha nje lapho sesithole inkokhelo yakho.
Ngabe ukukhokha kwami ​​kuphumelele?
Lapho inkokhelo yakho iphumelela uzothola i-imeyili ngokuzenzekelayo ngalokhu. (Kukhona nethuba lokuthi uzothola i-imeyili ebhokisini lakho logaxekile)
Sicela wazi ukuthi ezinye izindlela zokukhokha ezifana "nokudluliswa kwebhange" kungathatha izinsuku ezimbalwa zebhizinisi ukuqedela okwenziwayo.
Kungenzeka yini ukubuyisa i-oda lami?
Sihlala sihlose ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ethu ayayithanda imikhiqizo yethu, kepha uma udinga ukubuyisa i-oda, siyajabula ukukusiza.
Ngenxa yezizathu zenhlanzeko ungabuyisa i-oda lakho kuphela uma zingavulwa futhi zisesimweni esihle. (Kungakapheli izinsuku eziyi-14 zokusebenza kokutholwa)
Chofoza lapha ukubuka inqubo ephelele yokubuyisa.
Opticcolors umlingani wakho wamalensi anemibala nezinye izinto.
Siyinkampani yaseDashi esivele inezinkulungwane zamakhasimende anelisekile emhlabeni jikelele. Lokhu kungenxa yokuthi Opticcolors imele ikhwalithi, ukuthembeka nokusebenza okuhleice.
Kade sicabanga futhi sisebenza isikhathi eside ukuthi singakunikeza kanjani amalensi ombala wekhwalithi ephezulu ngentengo ephansiice. Sizame okuningi ukuthola into efanelekile engabizi futhi edinga ukulingana kahle nokuqukethwe kwamanzi okulungile. Lokhu kufanele kuqinisekise ukuthi amehlo akho ahlala ehlanzekile futhi enempilo. Ukuze sinikeze konke lokhu, sikhethe ingxenye ethambile ye-Phemfilcon A ephelele. Le ngxenye iqinisekisa ukulingana okuguqukayo, okuqukethwe kwamanzi okuphezulu kanye ne-pr ephansi engabiziice ongazuza kuyo.
Ngemuva kwalokho siklame ama-prints wemvelo kakhulu alungele lonke uhlobo lwamehlo. Amaphrinta aqhakambisa ubuhle bemvelo bamehlo, enza ukubukeka kuqhakaze ngokwengeziwe. Sisebenzise lokhu ku-lens eyagcina iba Opticcolors lens imibala. Opticcolors lens imibala uphelele njengesengezo for amaqembu, izinsuku ezikhethekile noma nje ukusetshenziswa kwansuku zonke.
At Opticcolors siyaqiniseka ukuthi ubuhle beqiniso bungaphakathi. Wonke umuntu muhle ngendlela yakhe ehlukile. Ngakho-ke sikusiza ngenjabulo ukuthi uzizwe muhle ngokwengeziwe kunalokho osuvele unakho. Ngabe unemibuzo noma udinga i-advice? Unganqikazi futhi uxhumane nathi!
Nanoma imuphi umbuzo?
Ungaxhumana nathi nge-imeyili! Sizojabula ukukusiza.
Ngingalulandela kanjani i-oda lami?